> Resource > Talooyin > Sida loo dalbado Black iyo White Photo Saamaynta
Waa maxay sawirka madow iyo caddaan (aka BW ama B & W)? Dhab ahaantii, ma ay joogin sawiro leh midabka madow iyo caddaan, laakiin sidoo kale midabo kala duwan ee cawlan. Hadda ka hor, sawir oo dhan madow iyo caddaan, ama monochrome. Xitaa ka dib markii filim midabka ahaa heli karo, waa caan ah ay sabab u qiimo jaban oo ay aqbalo in dadweynaha. Maalmahan, sawir madow iyo caddaan sida caadiga ah ku muujinayaa wax taariikhi ah ama qadiimka ah.
Maqaalkani waxa uu inta badan ku tusi doonaa sida loo beddelo sawir midab madow iyo caddaan ah, ka dhigi slideshow madow iyo caddaan in talaabooyin fudud, iyo sidoo kale la abuuro sawir madow iyo caddaan leh midabka.
Black iyo White Photo Saamaynta
Marka hadalka ku saabsan sixiddiisa sawiro, aad iska indho tirin kartaa Photoshop - taasoo keentay warshadaha software tafatirka sawirka by Adobe. Iyadoo Photoshop ama Photoshop Cunsurka, waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan in la beddelo sawir midab madow iyo caddaan ah.
Habka ugu fudud ee aad u hesho sawir madow iyo caddaan waa:
Tani waa hab burbur si loogu badalo sawirka si B & W. Dhammaan macluumaadka midabka la hoos doonaa shuqulkaaga oo finalka. Kala duwan, waxa aad heli kartaa tafatirka sawir aan burbur ku Photoshop: qabsato mar walba doorasho aad rabto in aad ka. Tusaale ahaan, waxaad u bedeli karaan sawir si BW marayo: lakabka> lakabka qabsiga New> cado / Saturation, iyo dhaqaaqo slide ah si ay ula qabsadaan saamaynta mar walba. Booqo halkan arrimo kale si loogu badalo in ay sawiro midab madow iyo caddaan.
Black iyo White Photo Muqaal
Cod iyo Muqaal waa hab fiican si ay u muujiyaan in aad sawiro madow iyo caddaan si dhegeyste. Waxa aad isticmaali karta Photoshop si loogu badalo sawir midab madow iyo caddaan, ka dibna u soo dhoofsadaan in aad software slideshow jecel yahay in la dhiso slideshow ah. Haddii kale, qaar ka mid ah software slideshow si fudud u abuuraa duubey qabanqaabiyey jir ah oo aan Photoshop ugu qaalisan in xaalkaa photos. Tusaale ahaan, DVD Muqaal dhise ka mid ah Old Film theme inay u beddesho aad sawiro midab in ay filim madow iyo caddaan ku daqiiqo. Just dajiyaan sawirkaaga, dooro Old Film theme, oo aad samaysay. Ma jirto baahi loo qabo in sawirka loo farsameeyo si gooni gooni ah. Hel software u leedahay in tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hor inta gadashada (laga bilaabo $ 49.95).
Samaynta Photo madow iyo caddaan ah oo la Color
Sawir madow iyo caddaan leh midabka waa farshaxanka iyo wanaag raadinaya. Halkan waxa kale oo aad qabsan karo sawir madow iyo caddaan la midab by Photoshop, ama si toos ah u qaataan nooc ka mid ah sawirada la codsiyada telefoonka.
1. Si fudud loo abuuro sawir madow iyo caddaan leh midabka isticmaalaya Photoshop
Raac this site: picturecorrect.com si loogu badalo sawir midab in sawir madow iyo caddaan la firirka midabka.
2. Haddii aadan rabin in la saxaa sawir ka dib markii laga qaaday qalabka, kaliya qaadan sawir madow iyo caddaan la daadiyo sida PowerCam aad iPhone.